Khabiirka Kala Duwan: Mashruuca Google ee Shield wuxuu ka caawinayaa ka hortagidda weerarka ka yimaada Hackers
Dadku waa inay billaabaan aqoonsiga qiimaha shirkadaha waaweyni ay joogaan. Waa weynTusaale ahaan waxa Google u sameeyey wariye kaas oo ahaa dhibane weerarka weyn ee DDoS. Shirkaddu waxay ku dhufatay oo kireeysay xisaabteeda adagAwoodda si aad ugu dhejisid hackka.
Brian Krebs waa baqeeri nabadgelyo darro ah. Weerarku wuxuu bilaabmay markii uu soo bandhigaydhaqdhaqaaqyo ganacsi oo qarsoodi ah oo ka kooban hal koox, ka dibna ka aargoosatay iyadoo soo saartay DDoS (qaybinta adeegga diidmada) ee nidaamka.DDoS ma ahan kuwo cusub maadaama ay jaanisku isticmaalaan waqti ka waqti - curso fotografia gratis canon. Si kastaba ha ahaatee, kiiskan gaar ah ayaa ka duwan, iyo hack ah ayaa ka xoog badanweligiis. Krebs ayaa qirtay in ay horay u qabteen weeraradii DDoS ka hor, laakiin waxba kama badna.
Artem Abgarian, Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka Sare, wuxuu aaminsan yahay in sababta ay tani tahay in qawaaniinta ay haystaan ​​hub ka badan intii aan horay u hayninsi ay u fuliyaan weerarradooda. Ugu horreyntii, bartilmaameedyada ugu caansan waa Windows PC-yada hore. Waxay caadi ahaan ku amri doonaan inay si toos ah ugu diraan spamgaadiidka goobta dhibbanaha iyada oo ujeedadu tahay in la garaaco xayiraad. Iyada oo kala duwanaanshaha qalabka online-ka online, hackers hadda waxay leeyihiinfursado badan oo ay ku wadaagaan iyaga.
Krebs kiisaska, khadadka ayaa isticmaalay botnets si loo bilaabo weerarka. Waxay markaasayaa addoonsaday qaar ka mid ah IoT (Internet of Things) qalabyada ka tirsan blogger..Waxay ahaayeen inta badan kamaradaha IP, rukumo, iyo cajaladaha fiidiyowga ee digital,kuwaas oo dhammaantood ay helaan internetka. Inta badan qalabka la soo magacaabay waxay leeyihiin sirta daciifka ah ama adag ee codka si looga ilaaliyo galmada.
Websaydhka Krebs waa ili macluumaad muhiim u ah dhagaystayaashiisa internetkabulshada amniga. Isticmaalidda fursado kala duwan oo loo heli karo, sida kor ku xusan, waxay ku guuleysteen inay garaacaan goobta, waxayna hubiyaan inwaxay hoos u dhigtay weligeed. Weerarka DDoS ee ka yimaada siriyeyaasha waa nooc cusub oo faafreeb ah. Weerarku wuxuu ku hayay macluumaadka dhagaystayaasha.
Waqtigan xaadirka ah, mid ayaa laga yaabaa inuu ku fekero meesha Google uu ku habboon yahay dhammaan arrimahan. Mid ka mid ahXogta dhowaan laga helay Google waxay ahayd inay bilowdo "Project Shield". Qorshaha mashruuca waa in uu yimaado badbaadinta saxafiyiinta sidasida Krebs. Waxay ka hortageysaa in ay qaataan weerarrada DDoS ee boggooda internetka.
Project Shield wuxuu wariyeyaashiisa u diraa wargeysyadooda si ay ugu adeegsadaan inay nuugaanwax kasta oo xag-jirnimo leh oo loo gudbiyay shabakadda iyada oo ujeedadu tahay in ay xoog badan tahay. Nidaamka kaliya maahan wax faa'iido leh saxafiyiintaDhibbanayaasha loo yaqaan 'hackers'. Isticmaalkeeda ayaa sidoo kale ka dhigaysa wadamadaas oo marar badan ku haysta waxyaabaheeda censored iyagoo isticmaalaya weerarada DDoSdawladaha
Marka hore, Krebs waxay heshiis la gashay shirkad Akamai si ay u daryeesho mawduuceeda.Si kastaba ha ahaatee, shirkadda maareynta content ma awoodi karto inay shabakadda ka ilaaliso weerarro ballaaran oo sidan oo kale ah. Shirkad kaleayaa u sheegay Krebs in nooca adeegga Akamai uu bixin doono isaga oo ku dhowaanaya $ 200,000 sanadkiiba.
Si loo yareeyo sheeko dheer, gaaban bogga internetka ee Krebs waa calaamad u ahmuhiimada ay tahay in dadku ay dejiyaan amniga shabakada. Haddii midkani aanu isticmaalin Google ujeedadaas, shirkadaha kale waxay bixiyaan adeegyo isku mid ah.Iyagoo ka faa'iidaysanaya tan, milkiileyaasha bogagga ayaa yareeya khatarta weerarrada DDoS si weyn, maadaama ay jabiyayaasha hadda u isticmaalaan faafreeb xoog lehhub.